तपाईंको पालिकाकाे चुनावी गणित कस्ताे छ ? शिलापत्रकाे निर्वाचन प्राेफाइल हेरी थाहा पाउनुहाेस् (तथ्यांकसहित)4min read Share
समाचार टिप्पणी : हैदरावाद हाउसमा हिन्दुत्व आदनप्रदान संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले हिन्दुत्वलाई बढावा दिए ।7min read Share
श्रीमती बेच्न खाेजेकाे झुटाे मुद्दामा जेल बसेका बमबहादुरकाे कथा (भिडियोसहित) श्रीमती मायालाई बमबहादुरले झुक्याएर बेच्न लगेको जाहेरी मानव बेचबिखनविरुद्ध सक्रिय संस्था माइती नेपाल र प्रहरीको योजनामा तयार गर्न लगाइयो 14 min read Share
हामीले सिफारिस गर्‍याैँ वर्षव्यक्ति ०७८, टुंगो लगाउने जिम्मा तपाईंको (फारमसहित) पाठकका लागि हामीले गुगल फारम राखेका छौँ2min read Share
निर्वाचन आयोगले कुन पक्षलाई देला विवेकशील साझाको तालाचाबी ? पार्टी संस्थापन पक्षले २६ जनालाई कारबाही गरी आयोगलाई यसको जानकारी गराइसकेको दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले मिलन पाण्डेलाई गरेको कारबाहीसमेत अध्यावधि गरेको छैन5min read Share
घुस्याहा जनप्रतिनिधि, पाँच वर्षमै कराेडाैं कुम्ल्याए दुई दशकपछि निर्वाचित रूपमा ब्युँतिएको स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई ३ हजारदेखि साढे ३३ लाख रुपैयाँसम्म घुस खाएको आरोप 10 min read Share
प्रचण्ड र माधवकाे गुन तिर्न गठबन्धनमा दृढ देउवा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा होस् वा सार्वजनिक मञ्चमा सत्ता गठबन्धनप्रति देउवा निकै दृढ सुनिन्छन् ।7min read Share
ज्ञानेन्द्रले गराएको त्यो 'असंवैधानिक' निर्वाचन निर्वाचनले आमनागरिकमा खासै उत्साह पैदा गर्न सकेको थिएन । त्यसैले ०६२/६३ को आन्दोलनपछि स्थापित सरकारले उक्त निर्वाचन बदर गरिदियो । र, सो निर्वाचनलाई अवैधानिक ठहराइयो ।7min read Share
प्रहरीमा देउवाको खराब ‘ट्र्याक रेकर्ड’ देउवाले ३० वर्षअघि रोपेको प्रहरीभित्रको बेथितिको बिऊ अहिले झाँगिएको छ । आफूप्रति बफादार प्रहरी तयार गर्नकै लागि देउवा सरकारले तीनवटा एआईजीको पद थपेको थियो । 8 min read Share
हाइब्रिड ‘डेल्टाक्रोन’ नेपालमा पनि घुमिरहेको त छैन ? ‘नेपालमा ओमिक्रोन र डेल्टा भेरियन्ट छ । दुवै भेरियन्ट रहेकाले समिश्रण भएर नयाँ भेरियन्ट नहोला भन्न सकिन्न,’ डा. पुन भन्छन् ।3min read Share
किन हुन्छ सिर्जनामाथि बारम्बार आक्रमण ? नेपालमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् गणतन्त्रको स्थापना भयो । यद्यपि, व्यक्तिमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुँदाहुँदै पनि स्रष्टाहरूका सिर्जनाले विभिन्न समयमा राज्य तथा विभिन्न संगठनबाट दबाब झेल्नुपरेको छ । 11 min read Share
घरमा ताला झुण्ड्याएर डायलाइसिसका लागि काठमाडौं ताहाचलमा बसेर हप्ताको दुई पटक डायलाइसिस गर्न उनी वीर अस्पताल पुग्छिन् । ‘खेती किसानी गर्ने हो । पाकेको धान बाली छोडेर डायलाइसिस गर्न काठमाडौं आएका हौँ । रोगले घरको ढोकामा ताला लाग्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘झापामै निःशुल्क सेवा पाएको भए यहाँ किन आउनु पर्थ्यो र ?’9min read Share
जब मिसको बिदाइमा विद्यार्थीले आँसु बगाए शिक्षिका सिंजाली विद्यालय छिर्नेबित्तिकै विद्यार्थीहरू डाको छोडेर रुन थाले । विद्यालय नछोड्न भन्दै रोइरहेका विद्यार्थीलाई सिंजाली सम्झाइरहेकी थिइन् ।4min read Share
ससुरालीमा जस्तै स्वाद र सत्कार दिने सुकदेवको ‘ससुराली’ सुकदेवको ‘ससुराली घर’ पुगेपछि खाना अर्डर गर्दा सालासाली भेटिन्छन् । महिलाका लागि छुट्टै ‘माइतीघर’मा पुग्न सकिन्छ । केटाकेटीका लागि ‘मामाघर’ छँदै छ । यस्तै, नयाँ शैलीमा सुकदेवले साथीहरूसँग मिलेर ६ महिनादेखि रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका छन् । 8 min read Share
रुस-युक्रेन युद्धमा पुटिनका ८ सारथि सीमानजिकै नेटो आए रुसको सुरक्षा खतरा बढ्ने पुटिनको चिन्ता छ । अझ उनको आत्मविश्वास के छ भने युक्रेन कब्जामा सफल भए सोभियत संघको साख फर्काउन झनै सहज हुनेछ । रुस-युक्रेन युद्धमा पुटिनका आठ सारथि छन् । पुटिनले उनीहरूसँग राय सुझाव लिने गर्छन् । 8 min read Share
चेपाङ समुदायका 'हिरो' रामकृष्ण हेडसर जम्माजम्मी श्री गणेश माविका प्रधानाध्यापक मात्र हुन्, रामकृष्ण प्रजा । तर यही परिचय उनका लागि देशभरका थुप्रै मावि हाँक्ने हेडमास्टरभन्दा फरक बनिदिएको छ । सिमान्तकृत चेपाङ समुदायबाट माध्यामिक तहको विद्यालय चलाउने रामकृष्ण पहिलो हुन् ।7min read Share
जापानको सीपले जन्माएको ‘बर्गर हब’ ‘जापानमै भएको भए अरुकै काम गरिरहेको हुन्थेंँ । नेपाल फर्किएर केही व्यक्तिलाई रोजगारी दिन पाएको छु । त्यो बेलामा जापानबाट फर्किने ठीक निणर्य गरेँछुजस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।9min read Share
परेवाकाे घरमा बदलिएकाे सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला 17 min read Share
विवेकशून्य भिड जम्मा पार्ने साधन बन्दै सामाजिक सञ्जाल र युट्युब झट्ट हेर्दा पढेलेखेकाे, तर नागरिक कर्तव्यबारे चेतनाशून्य देखिने पल समर्थक भिडले पीडितको मनोबल र आत्मबल कमजोर बनाउनेगरी सामाजिक सञ्जालमा पलको पक्ष लिएर पीडितको चरित्रहत्या गरिरहेकाे छ । 14 min read Share